Umatshini wokwenza i-cnc wokhuni kunye nabenzi basechina
Umatshini weLathes oMatshini waseTshayina weFenitshala yeFenitshala yeeNtloko ezi-4 zokukrola iKhabhinethi yoMnyango
Oku iintloko ezininzi kunye nothango 3d cnc umatshini nokukrola, ubukhulu becala kusetyenziswa ekuqhubeni izinto zezindlu, ezifana wobugcisa zezindlu, izincedisi ifanitshala isilinda, izinyuko ngezinyuko, izixhobo zomculo zezindlu njalo njalo.
Eyona Itafile yeRotter ye-4 × 8 ye-CNC iyathengiswa ngexabiso elingenaxabiso
I-Router yethu yeNtengiso ye-CNC yimveliso ethandwa kakhulu kwintengiso, isetyenziswa ngobunono kuyo
Umzi wentengiso, unokukrola / ukusika / ukukrola i-PVC, ibhodi ye-chevron, iibhodi zombala ophindwe kabini, i-Arcylic njalo njalo, ngenxa yomgangatho olungileyo kunye nexabiso elincomekayo esinalo lokufumana iiodolo ezininzi ezivela kwihlabathi liphela.
Intengiso eshushu I-1325 Ifenitshala Ikhitshi lokuKrwela i-Woodworking CNC Router Machine
I-axis ye-3 ye-CNC umzila nge-X, Y, Z axis kunye ne-spindle ezintathu zisetyenziselwa ukwenza uphawu, ukwenziwa kweminyango yekhabinethi kunye nokwenza izinto ezithandwayo, ngoku i-3 Axis CNC Router iyathengiswa ngexabiso elifikelelekayo ukusuka kwi-3 axis CNC router router - APEXCNC . Iinkcazo zeMveliso I-axis ye-CNC ye-CNC Iimpawu ze-1.Iinkqubo-ezintathu zizixhobo ezikrelekrele kunye nezoqoqosho ezinokutshintsha kwesixhobo esizenzekelayo. Ngokusebenzisa oluzenzekelayo iintonga oomatshini ezintathu ezizimeleyo, machining oluzenzekelayo multi-inkqubo ...
I-Linear efikelelekayo ye-ATC CNC Router kunye ne-Auto Tool Changer spindle
I-Linear efikelelekayo ye-ATC CNC Router ene-Auto Tool Changer isetyenziswa kakhulu kwishishini elenziwa ngefenitshala, kwishishini lokuhombisa ifanitshala, kwishishini lobugcisa bokhuni, kwishishini lokuhombisa ngomthi, kwishishini elenza izixhobo zeemoto, kwifenitshala yeplanga eqinileyo, kwifenitshala yeklasikhi, kwizinto zokuhombisa, kwiikhabhathi zomnyango, kwifenitshala yekhitshi eyenziwe ngomthi, izinto ngomthi kunye nezinye izinto processing ezifana Aluminium, acrylic, MDF, PVC. Iinkcazo zeMveliso Izinto eziluncedo kwi-Linear ATC CNC router APEX1325C: 1. Umsebenzi: Linear ATC CNC r ...
China New 300mm bokushicilela 4 Axis Atc ngomthi nangokukrola Machine for Furniture
1.Umzimba womatshini wesinyithi osisikwere oqinileyo, ongaqinisiyo kunye nonyango lokuguga, inkqubo efanelekileyo yokuwelda, ukuqinisekisa uzinzo lomatshini.
2. Izixhobo ezikhethekileyo zokuphelisa uxinzelelo lwe-welding, ukucwangciswa okuphezulu kokuchaneka kokuqinisekisa ukuchaneka kwaye akukho deformation.
3. Umzimba womatshini omkhulu wenza uzinzo kwaye akukho kubanjwa ngesantya esiphezulu.
4. I-XYZ yonke ifaka isihlunu esithunyelwe ngaphandle, isakhelo sokuchaneka okuphezulu kunye nesikhokelo esikwere somgama, qinisekisa ukuchaneka okuphezulu.
5. Uyilo lobuchwephesha bobuchwephesha, ubume besayensi kunye nokubonakala okunesisa, ukuphakama kwe-gantry 200MM kunokuqinisekisa ubungakanani bendawo yokusebenza kwe-Z ...
Wood Furniture Machinery 1325 CNC umzila Wood nangokukrola Machine kunye Atc yokuluka
Ilungele ifanitshala yephaneli, ifanitshala yeplanga eqinileyo, ifanitshala yeofisi, imveliso eyenziwe ngomthi, kunye nezinye izinto ezingezizo zesinyithi nezithambileyo
4 Axis Atc CNC umzila Wood mfanekiso Cutting kunye Zenzekelayo Isixhobo ngokutshintsha
I-Axis Atc CNC umzila we-Wood Cutting Cutting nge-Automatic Tool changer isetyenziselwa i-slot slot yokugaya, ukubhola, ukusika kunye ne-keyhole, i-axis ye-CNC ye-CNC isebenzisa i-9KW HSD isixhobo sokutshintsha izixhobo ezizenzekelayo kunye ne-8 isikhundla se-rotary carousel tool holder. kumhlaba owahlukileyo. Iinkcazo zeMveliso Izinto eziluncedo ze-4 Axis CNC umzila wokhuni: 1. Ityhubhu yentsimbi enkulu yentsimbi eyakhiweyo, emva kokuguga kunye nokunyanga unyango, inokuthenjwa kwaye izinzile kwaye akukho lula ukuyiguqula. 2. Ngaphezulu ...
Iintloko ze-4 ze-CNC ze-Woodworking Router Machine ye-3D
Iintloko ezimbini ze-CNC umzila weenkuni oKwenza ifanitshala yokwenza umatshini
Lo ngumsebenzi olula wokukrola umatshini. Iyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zakho ezininzi zokwenza imveliso kwishishini elingesosinyithi ngaphandle kokuthenga okuphezulu kunye nokusebenzisa iindleko. Ngapha koko, ikwasisixhobo esifanelekileyo sokukrola kushishino lokuchwela. ngexabiso eliphantsi kunye nokuphila ixesha elide.
Umgangatho olungileyo we-CNC umzila wokukrola umatshini we-CNC 1325 Umatshini wokusika iinkuni
Intshayelelo emfutshane 4 axis cnc umzila
* Ifakwe 400mm axis rotary